Property Videos - Myanmar Mega Property Co.,Ltd
Times City Complex...
Location: No.37/Quarter, Between Hantharwaddy and Kyun Road, Yangon, Myanmar.
May Inya Residence...
Location: No.14AA, Inya yeiktha Street, Yangon
GEMS Garden condo...
Location: GEMS Garden Condo,Thazin Rd, Yangon, Myanmar.
Location: No.14AA, Inya yeiktha Street, Yangon, Myanmar.
Space Yankin condo 4bedroom Unit...
Location: 23 Yanshin RoadRoad, Corner of Yan Nyein Road and Yan Aye Road, Ward No (5), Yangon, Myanmar.
Space Yankin condo Customers Review...
Space Yankin Condo 2bedroom Unit...
Space Yankin condo 3bedroom unit...
INNO CITY Condominium...
The most popular (B1 type) in Inno City Serviced Apartment Project. We are giving fully decoration and furniture built in . The Special exchange rate Promotion is 1 USD = 1,300 Kyats until End of October 2018. Please visit to the show room today. We will manage to get the best payment for you. Location – Shwe Man Thu Bus Compound, Corner of Wayzayandar Road & Parami Road,Ward(4), South Okkalapa Township, Yangon.
Location: At the corner of Kabar Aye Pagoda raod and Kanbae road, Yangon,Myanmar.
If u arearesident of The Central, life can be worry-free and refreshing. Stay safe at home while enjoying the beautiful scenery of Inya Lake. The Central also play its parts in keeping everyone safe and sound. We encourage social distancing by staying 6ft apart from each other when you come visit The Central to come get your take-away. We also make online orders available for you to encounter less people as possible. Stay safe and stay strong.
သင်ဟာ The Central မှာ နေထိုင်တဲ့သူဆိုရင် သင့်ရဲ့ နေ့ရက်တွေက လုံခြုံပြီး သာယာပျော်ရွှင်မှုရရှိမှာ အမှန်ပါ။ The Central က မိမိနေအိမ်မှာပဲ လုံခြုံစွာနေရင်း အင်းလျားကန်ရဲ့ အလှကို ရှုစားရင်းလိုက်ရအောင်။ The Central ကလည်း အားလုံးအတွက် ဘေးကင်လုံးခြုံစေဖို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ The Central စျေးဝယ်လျှောက်လမ်းက ဆိုင်တွေမှာ ပါဆယ်ဝယ်မယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ၆ပေ အကွာမှာရပ်ပေးခြင်းဖြင့် social distancing ပြုလုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် online က မှာယူနိုင်အောင်လည်း ပြုလုပ်ပေးထားတာကြောင့် လူအများနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံတာကို လျော့နည်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Location: Lane of Wai Za Yan Tar road, Yangon,Myanmar.
အပြည့်အစုံပြင်ဆင်ပြီး၊ အသင့်နေထိုင်နိုင်မယ့်အခန်းက Serene မှာ စောင့်ကြိုနေပါပြီ ===================== ရန်ကုန်မြို့ရဲ့၊ အချက်အခြာကျတဲ့နေရာမှာ တည်ရှိပြီး၊ အကောင်းဆုံး Facilities တွေနဲ့ Serene Condominium မှာနေထိုင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားနေပြီလား။ အပြည့်အစုံပြင်ဆင်ပြီး Master Bedroom ၃ခန်း၊ Single room ၁ခန်းပါဝင်တဲ့ Luxury Unit အခန်းကို Serene မှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ အကျယ်အဝန်း 3017 Sq-ft ရှိတဲ့အပြင် အခြား Facilities တွေအနေနဲ့ Indoor Swimming pool, Gym, Car Parking, Table tennis, Kids playground, 24 hours security, Card access system နဲ့ 24 hours backup generator တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ အချက်အခြာကျတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့် Serene နဲ့ လက်တစ်ကမ်းမှာ၊ Waizayantar City Mart, Gandamar Wholesales, ဘဏ်များ၊ ဘားနဲ့ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဆေးရုံများနဲ့ ဂေါက်ကွင်းတို့လည်း တည်ရှိနေပါတယ်။
Emerald Bay Condominium...
Location: No.12, Pyay raod,Yangon,Myanmar.